काठमाडौं – भारतको उत्तर प्रदेशस्थित हरदोईमा रहेको एक सरकारी अस्पतालमा एक नर्सले एक नवजातको औंलाहरू काटिदिँदा शिशुको मृत्यु भएको छ ।
ती नवजातका दुवै हातमा ६–६ औंला थिए । नर्सले जान्ने भएर प्रत्येक हातको एक–एक औंला काटिदिइन् । त्यसपछि शिशुको स्वास्थ्य बिग्रियो र मृत्यु भयो ।
शिशुका पिताले नर्स विद्या देवीविरुद्ध उजुरी दर्ता गरेका छन् । प्रहरीले हत्याको उजुरी दर्ता गरेर अनुसन्धान शुरू गरेको छ ।
शनिवार राति बाड करेंखा गाउँमा बस्ने लक्ष्मी नामक महिला प्रसव पीडा भएपछि बिलग्रामको सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रमा भर्ना हुन आएकी थिइन् । आइतवार बिहान उनले छोरा जन्माइन् । नवजातको दुवै हातमा ६–५ औंला थिए ।
लक्ष्मीका पति रवीन्द्रले नवजातको एक–एक औंला नर्स विद्या देवीले काटेको आरोप लगाए । बच्चाको स्वास्थ्य बिग्रे पनि स्वास्थ्य केन्द्रले आमा र शिशु दुवैलाई डिस्चार्ज गरेको अनि बाहिर आउनेबित्तिकै शिशुको मृत्यु भएको उनले बताए ।
स्वास्थ्य केन्द्रका डाक्टर एसके रावतले भने, ‘बच्चाको औंला काट्नका लागि परिवारसँग सहमति लिइएको थियो कि थिएन भन्ने विषयमा अनुसन्धान गरिनेछ । दोषी भेटिएमा सम्बन्धित कर्मचारीविरुद्ध कारवाही चलाइनेछ ।’
गुगल म्याप पछ्याउँदै जाँदा श्रीमतीलाई अर्कैको अँगाल...
भारतमा भेटियो दुईटाउके कोब्रा, 'भगवान' भन्दै स्थान...
अमेरिकी डलरसम्बन्धी केही रोचक तथ्य
२० वर्षको उमेरमा २० हजार करोडको मालिक !
नेकपा सचिवालयमा ओलीले भने– 'मेरो स्वास्थ्यमा तीव्र रूपले सुधार आइरहेको छ'
सागमा २ स्वर्ण पदक विजेता मन्देकाजीलाई नगरपरिक्रमा सहित साढे ५ लाख दिएर सम्मान
निकुञ्जको बाघ गाउँ पसेपछि...
स्थायी कमिटी बैठकअघि बालुवाटारमा नेकपा सचिवालय बैठक
अनुदारवादीको अर्को मोर्चा ?
नेकपा सचिवालय बैठक बालुवाटारमा, आजै स्थायी कमिटी बैठक पनि
सिन्धुपाल्चोक बस दुर्घटना : मृत्यु हुनेको संख्या १४ पुग्यो
हिमपातपछि देखिएको धुम्बाताल
हत्या आरोपमा ३ जना पक्राउ